Maxamed Xirsi Faarax | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Inteena badan waan maqalnay sheekada Khaliifkii waynaa ee muslimiinta, Cumar ibnu Al-Khattab (Ilaahay ha ka raalli noqdee) taas oo ahayd in uu Nabi (scw) uu soo aaday si uu wax u yeelo isagoo seef galka ka baxsan sita balse markii uu albaabka Daar Arqam uu yimid toobadkeenay islaamkana uu rumeeyay. Illaahay fadligiisa iyo alla kacabsigiisa darteed wuxuu noqday mid kamida kuwa ugu waa wayn saxaabada Nabiga NNKH waxa uuna kamid noqday kuwii janada loogu bishaareeyey ayagoo adduunka jooga. Maanta sheekadu waxay lamid tahay sheekadi saxaabigii rasuulka NNKH, Umar ibn Khattab (ra). Tani waa sheekada nin Ingiriis ah oo doonayay …
Ilaa iyo waayo hore waxaa jirey alaab dhadhankoodu xaamud yahay, waxaana kamid ahaa alaabtaas cinabka ceydhiin, liinta, khalka iyo caanaha suusaca ah. Qarniyo kooban dabadeed walaxda keenaysa dhadhankaas xaamudka ah ayaa loobixiyey isku dhisyada Asiidh. Isku dhisyadaas magacooda waxaa laga sooqaatay magaca laatiiniga ah “acidium” oo loo akhriyo asiidhuyam, macnaheeduna yahay dhadhan kulul. Asiidhyo: ururka ugu muhiimsan kiimikooyinka ayaa loogu yeeraa asiidho. Asiidhasaas oo waraaqda litmaska kadhigaya casaan ama guduud, taas oo kadhigan in PH koodu ka hooseeyo 7. Asiidhada caanka ah: Asiidhada caanka ah ee inta badan kemisteriga aad kula kulmaysid waxaa ka mid ah: Haydarokoloorik asiidh HCl(aq) …
Maatarku waa waxkasta oo leh cuf iyo culays, meel marana buuxinkara, taas oo ka dhigaysa in maatarka oo dhami uu lee yahay ama ka siman yahay labadaas astaamood. Sidaa awgeed wixii aan lahayn astaamahaas uguma aan yeeri karno maatar tusaale, kulka, jabaqda, ilayska iyo iwm. Hadii aad ufiirsato kuwaas waxaa ogaanaysaa in ay yihiin tamarro kala duwan. Inkastoo maatarka oo dhami uu ka siman yahay labadaas astaamood hadana ma ahan mid walaxaha muuqoodu uu yahay kuwo isku mid ah, waayo waxa aad arkaysaa walxo iswada haysta oo adag sida dhagaxa, qalinka, buugga, iwm. Sidoo kale waxaa arkaysaa walxo dareere …